Etu esi wunye gam akporo M Preview na Nexus 5, 6 ma obu 9 | Gam akporosis
Anyị enweela gam akporo M ebe a na akụkọ niile ọ na - eweta n'ụdị nlele maka nbudata na ntinye maka ngwaọrụ Nexus 5, 6 na 9.
Otu gam akporo M na pụtara maka isi ihe isii nke ahụ bụ Sundar Pichai kwupụtara n'onwe ya na Isi okwu na Google I / O 2015. Ihe mgbaru ọsọ 6 nke gam akporo M bụ: ka mma ijikwa ikikere ngwa, taabụ omenala Chrome, Ntanetị njikọ na ngwa, Android Pay, akara mkpisiaka nkwado na njikwa batrị ka mma. Ewezuga akwụkwọ akụkọ ndị a, nkọwa ole na ole ga-abịarute dị ka nhọrọ ederede ka mma yana njikwa olu doro anya maka ọkwa, mkpu, wdg.
1 Gam akporo M Preview na Nexus gị
2 Etu ibudata ma wụnye gam akporo M Preview
3 Abụọ gam akporo M Preview mmelite tupu ya tọhapụ
Gam akporo M Preview na Nexus gị
Otu nke isi anyụike nke gam akporo M bụ mmezi nke arụmọrụ nke ọnụ yana na batrị dịruru okpukpu abụọ, ọ bụ ezie na a ghaghị ịhụ nke a n'ezie, ebe ọ bụ na anyị niile maara otú ha si erekarị uru, nke mere na mgbe e mesịrị, ha adịchaghị. Na nsogbu dị ka batrị, ị ga-abụ kpachara anya mgbe niile.
Ndị nwere ihu ọma nwere Nexus 5, Nexus 6 ma ọ bụ Nexus 9 nwere ike ịnweta nyocha gam akporo M, ọ bụ ezie na nke a na-abịa na ụfọdụ chinchi karịa ndị ọzọ na ọ bụghị arụmọrụ a tụrụ anya ya na nsụgharị ikpeazụ, nke ga-abịa kpọmkwem na ọdịda ka ọ mere n'afọ gara aga. Ngwọta ndị na-agakwaghị eru eru maka nsụgharị ndị ọhụrụ bụ Nexus 4, Nexus 7 na Nexus 10, ọ bụ ezie na ha ga-enweta mmelite nche maka afọ ọzọ.
Etu ibudata ma wụnye gam akporo M Preview
na mmepụta ihe oyiyi nke ngwaọrụ Nexus atọ ahụ dị site na njikọ a.
Knowmara nzọụkwụ niile na ntinye ya ị nwere ike ịkwụsị ndu a.
Dika m kwuru n’elu Cheta na ị na-eche ihu ngosipụta maka ndị mmepe na ihe niile ọ pụtara. Site na nzaghachi nke natara, arụmọrụ ahụ adịghị njọ, mana enwere ike ịnwe njikọta na nchinchi ndị ọzọ na-achọghị maka ngwaọrụ anyị chọrọ iji kwa ụbọchị, yabụ a dọrọ gị aka ná ntị.
Abụọ gam akporo M Preview mmelite tupu ya tọhapụ
Anyị na-eche ihu ọhụụ banyere gam akporo M Preview na nke ahụ bụ Gọọmentị na-akwado atụmatụ iji melite nlele ọhụụ opekata mpe ugboro abụọ tupu ntọhapụ ikpeazụ.
Nke a mara site na Isi okwu mgbe Chet Hasse kọwara atụmatụ ndị otu gam akporo iji melite Onye Mmepụta Preview. N'adịghị ka afọ gara aga na gam akporo L, Google enweela usoro mmelite maka gam akporo M Preview. Otu maka ihe ga-abụ na njedebe nke June, na onye ọzọ maka njedebe nke July, nke a ga-etinye mgbanwe na-adabere na nzaghachi natara n'aka ndị mmepe.
Mmelite ndị a ga-egosi ụzọ ikpeazụ maka mwepụta nke gam akporo M maka ọdịda, na ga-ekwe ka ihe niile na-aga mma ma n'ihi na-atọ ndị ọzọ ngwa mmepe na Google na-enwe ike hapụ ikpeazụ software nke bụ ihe na-ahụhụ na-enweghị ahụhụ. Nke a pụtara na gam akporo Lollipop, agbanyeghị na ọ bụrụla mmelite dị egwu, ewerela nkatọ ya na nchinchi na enweghị arụmọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Ngosipụta gam akporo M dị ugbu a maka Nexus 5, 6 na 9
hello androidsis, ị maara ma ọ bụrụ na android m ga-abịa lg g3 stylus ??
Zaghachi nye erwin gomez alvarado
Dị ka oge niile, ozi ezighi ezi ma ọ bụ ezughi oke, njikọ maka ntuziaka nwụnye ezighi ezi
Ihe ngosi 18 kachasị mma nke eji emepụta Google